HomeWararka Ciyaaraha MaantaPierre-Emerick Aubameyang oo seegi doona kulanka Sheffield United
April 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska 0
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ku qasban tahay inay la qabsato maqnaashaha kabtankeeda Pierre-Emerick Aubameyang kulanka ay u safreyso Sheffield United ee Premier League.
31 jirkaan ayaa kursiga keydka ku soo bilowday bartamihii isbuucaan kulankii Slavia Prague, laakiin wuxuu u muuqday bedel si uu u dhiso Nicolas Pepe kulankii ay barbaraha 1-1 la galeen lugtii hore ee wareega 8da Europa League.
Si kastaba ha noqotee, The Athletic ayaa ku warramay in Aubameyang tan iyo markii uu ku dhacay hargab, natiijadaasna uusan diyaar u noqon doonin safarka maanta ee Bramall Lane.
Waa la arki doonaa haddii Aubameyang loo ogolaado inuu ciyaaro lugta labaad ee isbuuca soo socda ee ay la ciyaarayaan Slavia, laakiin ku jiraa xilli ciyaareed niyad jab leh, isagoo dhaliyay sagaal gool 25 kulan oo Premier League ah oo uu u ciyaaray kooxda Mikel Arteta .
Warbixinta ayaa intaa ku dareysa in Emile Smith Rowe uu sidoo kale ka maqan yahay safarka Bramall Lane, maadaama laacibka xulka England ee 21-jirada uusan ka soo kaban dhaawac canqawga oo uu qabay bartamihii isbuucaan.
Labada ciyaaryahan ayaa ku biiraya dhaawacyada mudada dheer maqan Kieran Tierney iyo David Luiz qolka daaweynta, halka Martin Odegaard loo arko inuu shaki weyn ku jiro sababo la xiriira dhibaatooyin canqowga ah oo isaga u gaar ah.